Mari & Upfumi neakasarudzika Amulet yeMammon - Nyika yeAmulets
Mari & Pfuma pamwe neakasarudzika Amulet yeMammon
8 zvinhu zvasara
Tora Mari & Upfumi neNew Special Amulet yeMammon
Simba rake riri kubatsira vanhu kuti vawane hupfumi hwakawanda, huwandu uye hupfumi. Izvi ndezvechokwadi chaizvo sezvo isu mashanu takava nezviitiko zvakawanda zvakanaka mundima iyi nekudana Mammon.
Mammon yakasimba chaizvo uye ichida. Kana iwe uchikumbira pfuma yepfuma uye pfuma iwe uchada kugovera zvipo. Chipo chakanakisisa chedhiemon iyi iGolide. Mari dzegoridhe, pendants, mitsipa, zvichingodaro. Achawedzera chipo chimwe nechimwe ne100 kune uyo anokudza.
Pendant dhayamita: 35mm - 1,18 "
Sezvaunoziva, zvakajairwa amulets haigone kubatwa nevamwe vanhu, nekudaro zvichiita kuti zvive zvakaoma kuupfeka kuti uoneke kune vamwe. Mushure mekugadzira mapini, ayo angangobatwa nekuonekwa, takasangana nemhinduro ichibatanidza iyo 2. Haidzokezve yete kwete pini asi inonyatso pfeka.
Nedumwa iri vanhu vanokwanisa kuona nekubata tsumo yako, vanhu pavanoona mazango, zvirinani uye nekuchimbidza iwe uchaona iri simba richiita zvishamiso, zvakafanana nebheji, asi masimba aro haana kusimba sepini yebhegi.
Kune rimwe divi, amulet inozozadziswa zvizere mushure memazuva makumi maviri nemasere uye masimba anotanga kukura kubva panguva iyoyo. Ichi ndicho chakakwana chinoshamisira kana iwe uchida simba reakajairika amulet ine mhedzisiro mhedzisiro yepapel pini. (lapel pini inowana mhedzisiro mumazuva matatu - manomwe uye ino yamuro mune angangoita mazuva gumi) uye kurerukirwa kwepfungwa kuti hazvina basa kana mumwe munhu akabata chitumwa chako.
Mhedzisiro chete kune izvi ndeyekuti amulet inoda kucheneswa uye kubhadhariswazve mwedzi gumi nepfumbamwe. Iwe unogona kuzviitira iwe pachako nepadhi yekuchaja kana kuraira sevhisi iyi kubva kwatiri
Iyo Mamoni pendant ine akasunga anosunga uye mashiripiti sigil. Iyi Mamoni pedant chikamu cheunganidzwa yedu nyowani yeTerra Incognita. Aya ndiwo masimba ane simba kwazvo, sigil akafuridzirwa amulets.
All edu amulets uye mhete vane sarudzo yekumisikidzwa uye kutsveneswa kumuridzi. Izvi zvinoreva kuti tinosunga masimba kune amulet kana kurira uye kumisikidza amulet yemuridzi.
Izvi zvinoitwa mukati menguva yakareba 1 - 5 mazuva zvichienderana nerudzi rwechimurenga uye nerenda yemagetsi yakakosha yatinobatirira izvi.
Chikamu chakakosha chekuchenesa uye kuchaja kunoitwa natenzi wedu.
Unogona kusarudza izvi mune sarudzo.
Pane mamwe amulets edu unogona zvakare kusarudza sarudzo yesimbi keychain panzvimbo yechinhu chinopfeka. Uyu unongova mubvunzo wezvaunoda iwe pachako.
Zvekushandisa unofanirwa kuti utumire zita rizere, zuva rekuzvarwa uye guta rekugara remunhu achazoripfeka. Iwe unogona kusanganisira izvi zvinyorwa mutsamba kana iwe uchiraira kana kuzvitumira kwatiri newhatsapp kana email.